Isibaya seegusha esiDala seViala-Indalo ethuleyo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJean
IBergerie du Viala yakudala inikezela ngendawo yokuhlala etofotofo kwaye imnandi ye-80 m², ipholile kakhulu ehlotyeni, equlathe amagumbi amabini ane-mezzanine, enomthamo wokulala wabantu aba-4 ubuninzi, ebekwe kwihektare enye yomhlaba. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela lixhotyiselwe ukuhlangabezana neemfuno zakho. I-cottage yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa uhambo (GR71C) kwipaki yendalo yengingqi yaseGrans Causses, ngeenyawo, ngehashe, ukukhwela ibhayisekile entabeni, kufutshane neCouvertoirade kunye neMontpellier.
Le ndawo yokuhlala ikwisibaya segusha esidala, esakhiwa ngenkulungwane ye-19, esavelisa ubisi lwegusha ukuze kwenziwe iRoquefort yodumo; Iigusha zahlaliswa, kodwa kwanamahashe kwakunye nobisi. Ngokukodwa indawo epholileyo kwaye ethandekayo ehlotyeni, indawo yokuzola kunye nokuphumla. Iindawo ezininzi ezikhethekileyo zokutyelela: I-4 Gorges (Tarn, Jonte, Vis, Dourbie) kunye ne-4 Caves (L'Abeil, Dargilan, Bramabiau, Aven Armand) ngaphantsi kweyure enye.
4.77 · Izimvo eziyi-92
I-hamlet yaseViala yindawo ezolileyo kakhulu ejikelezwe yindalo kwiParc des Grands Causses. Umzila wokuhamba kwi-causse, i-GR71 C, iya kwi-Viala du Pas de Jaux (i-16 km ngebhayisikili 1 iyure enye indlela). Ilali entle yaseCornus ikumgama weekhilomitha ezi-1, apho uya kufumana iivenkile eziyimfuneko: ivenkile yegrosari, ihotele-indawo yokutyela, iposi, umsasazi.
Amaxwebhu onawo, ukuze undwendwele iiCausses ezahlukeneyo (iMejean, Noir, N. des Cévennes park, Navacelles circus ...), ukukhwela intaba okumangalisayo okanye ukukhwela ibhayisekile entabeni. Kodwa nangoSeptemba, ngo-Okthobha nangoNovemba ugqatso lokunyamezela kwamahashe eFlorac kunye noMnyhadala weTemplars kunye neHospitallers, Integral of the causses, iMarathon du Larzac, iTrail du Larzac, iLa Nantaise, imidyarho ejikelezayo yeFCO Federation.
Amaxwebhu onawo, ukuze undwendwele iiCausses ezahlukeneyo (iMejean, Noir, N. des Cévennes park, Navacelles circus ...), ukukhwela intaba okumangalisayo okanye ukukhwela ibhayisekil…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cornus